चितवनमा एक पटक घुम्नै पर्ने ठाउँ, सिन्ति झरना शक्तिखोर ( भिडियो सहित ) – Narayani Dainik
हेल्लो, के खोज्न चाहानुहुन्छ?
चितवनमा एक पटक घुम्नै पर्ने ठाउँ, सिन्ति झरना शक्तिखोर ( भिडियो सहित )
चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नं. ९ र १० को सिमानामा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र सिन्ती झरना सम्भावना भएको एक पर्यटकीय गन्तव्य हो। यो झरना सम्म जानको लागि केहि समय पहिले नेपालि सेनाले बाटो बनाएको थियो। कालिका नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा जनपथ प्रहरीले श्रमदान गरी सो बाटो निर्माण भएको छ । प्राकृतिक मनोरंजन रम्न चाहने जो कोहीलाई लोभ्याउने यस झरनाको उचित व्यवस्थापन भने अझै हुन सकेको छैन।
चितवन लाई देशकै तेश्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा मानिदै आईएको छ। चितवनमा रहेको सौराहा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बसाईलाई लम्ब्याउन यस्ता झरना एवम् उपर्दाङगढी तथा सिराइचुली जस्ता मनमोहक क्षेत्रहरुले ठुलो सहयोग पुर्याउने छन। यस क्षेत्रमा बस्दै आएका चेपाङ जातीको रहनसहन, भेषभुषा, कला, संस्कृतिलाई समेटेर सौराहा–सिन्ती झरना–उपर्दाङगढी–सिराइचुलीलाई जोडेर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।
सरकारी तवरबाट पनि यस क्षेत्रलाई चितवनको नमुना पर्यटकीय स्थलको रुपमा बिकाश गर्ने योजना रहेको छ। नगरपालिका र स्थानीयको सक्रियतामा अहिले त्याहाँ सौचालय बनाउने काम भई रहेको छ। नजिकै रहेको भरतपुर , नारायडगढ बाट २५ किलो मिटरमा पुग्न सकिने यस पर्यटकीय क्षेत्रमा दिनहुँ हजारौं स्थानीय पर्यटक आउने गरेको त्याहांका स्थानीय सोम बहादुर चेपाङले बताए।
कालिका नगरपालिका , शक्तिखोर बाट लगभग १ घण्टाको पैदल यात्रा गरेरे पुगिने उक्त झरनाको नाम सिन्ति झरना रहेछ। त्यो नजिकै रहेको चेपाङ बस्तीमा न अहिले सम्म मोटर बाटो पुगेको छ नत बिजुली नै पुगेको छ। तर पनि त्यस क्षेत्रमा अहिले आन्तरिक पर्यटकको संख्या दिनानु बढेको बताएका छन। अझै यसलाई व्यवस्थापन गरेर लग्यो भने भविष्यमा देशकै एक उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने पक्का छ।
शक्तिखोर बाट उकालो लागे पछी झरना नपुगुन्जेल जति थकाई लाग्छ , त्यो माथि पुगेर एक पटक पानिमा भिजे पछी सबै थकान एकै छिनमा मेटिने रहेछ। यस झरनाको सरसफाई गर्न बेला बेला भिभिन्न संघ संस्था पनि आउने रहेछन। हामि त्याहाँ पुगेकै दिन , हाम्रो दृष्टि, राम्रो दृष्टि युवा जागरण क्लब पनि झरनाको सरसफाईको लागि त्यहीं पुगेको रहेछ। हेर्नुहोस यसै झरना सम्मको हाम्रो यात्रा भिडियोमा।
रातारात बाहिरियो सोनाक्षीकाे गोप्य अं*ग देखिने तस्बिर( तस्विर )
हेमाको उजुरीसँगै छवी–शिल्पा जेल जाँदै, कानुनी प्रक्रिया यस्तो छ ( भिडियो सहित )
Banner3 days ago
त्रिवेणी ड्राइभिङ्ग अब गैंडाकोटमा पनि
नारायणी सेरोफेरो2 days ago
कांग्रेसको जगलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्य र नेता-कार्यकर्ताको चाहनाका कारण सभापति उम्मेदवारी दिन लागेको हो : बिजयराज शर्मा भुसाल
राजनीति6 days ago
तरुण दलको चितवनको सदस्यमा पुरुषोत्तम कंडेल ‘पुरु’ मनोनित
नारायणी मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रा.लि.
भरतपुर–१० , चितवन
मोबाइल - 9846782512
संचालक बिक्रम शर्मा
सम्पादक विपिन कंडेल
संवाददाता सृजना ढकाल
Copyright © 2020 Narayani Dainik सूचना बिभाग दर्ता नं. १६९९/०७६-७७